China Fithem ks-011b isina mvura mimhanzi isina waya bluetooth mutsipa yakaturika mahedhifoni mahedhifoni vagadziri uye vanotengesa | Kaiwansi
1. Chimiro chechigadzirwa idhinda yesilica gel. Rudzi urwu rwemahedhifoni harunzwe huremu hwemusoro kana wapfeka pamutsipa.
2. Izvo zvekutsvaga zvinhu zvinogona kuve zvinoenderana maererano nezvinodiwa nevatengi. Izvo zvinhu uye logo kurongedza zvakare zvakanyanyisa uye zvinosangana neruzhinji maonero.
Iko kuseri kwepakeji yangu kwakadzikama kwazvo nechitema senge kumashure, uye iro divi rakachena, chena uye dema zvine fashoni zvakanyanya, uye iyo dhizaini dhizaini ine hupenyu. Mufananidzo weiyo nharembozha iri pakati pebhokisi yakajeka pakatarisa, uye inoratidzwa zvakajeka pamberi pevanhu. .
3. Inoshanda isina mvura yakanaka kwazvo. Iyo isina mvura nhanho IPx5. Kunyangwe isingakwanise kudzikisira ruzha, inogona kudzikamisa ruzha panyama. Mhete nenzeve zviri pedyo chaizvo. Izvi zvinoderedza zvakanyanya ruzha rwekunze uye rinoziva kudzikisira ruzha rwemuviri. Nzeve dzenzeve dze shark fins zvakare Izvo zvakanaka kwazvo kuti iyo headset haidonhe nekuda kwekumwe kurovedza kwakanyanya panguva yekurovedza muviri, uye mahedhifoni mashandiro makiyi zvakare akareruka kushanda. Pairi maviri epachigunwe enzeve anopiwawo. Iko kune zvakare usb yekuchaja tambo, pamwe neyechigadzirwa bhuku uye kadhi yewarandi.
Horn dhayamita ∅9MM
Mutauri impedance 16Ω
Kakawanda kupindura 20Hz-20KHz
Battery kugona 220mAh
Bluetooth vhezheni V5.0
Usage nguva 300hours
Bluetooth chinhambwe 10M
Isina mvura IPX5
4. Iko kushandiswa kweearifoni kwakanyanya mushandisi-kunoshamwaridzika, kwakafanana neyakajairwa maBluetooth nzeve. Paunoshandisa iko kekutanga, tinya uye ubatise bhatani rebasa kusvikira mwenje webhuruu uchimhanya nekukasira muofficial state, iwe wopinda pairing mode, tsvaga iyi KS-011B pachigadzirwa, uye unogona kuibatanidza.
Pashure: Fithem Ks-009SBluetooth isina mitambo yemitambo isina mvura uye yekuzorora mahedhifoni epamba
Zvadaro: Ks-008 fithem Isina mvura ishe yemitambo isina waya bluetooth headset uye chikepe headset akanaka mubatsiri wemitambo uye yekuzorora hofisi
Ks-008 fithem Isina mvura Inotamba isina waya blueto ...
Fithem ks-020 makaralı wireless nharembozha webasa ...
Ks-012 fithem mitambo yemitambo isina waya yemusoro bl ...